आज, पसलहरूमा खिलौने को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव, तर तिनीहरू एकदम महंगा। क्रममा विरक्तलाग्दो छैन बच्चा, तिनीहरूलाई आफैलाई बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। साथै, तपाईँले प्रक्रिया भाग लिन आफ्नो बच्चा प्रस्ताव, यो आफ्नो कल्पना र तर्क विकास हुनेछ, र साथै, तपाईं रचनात्मकता साझेदारी ठूलो खुशी प्राप्त हुनेछ। यहाँ कसरी केटाहरू र बालिका दुवैलाई अपील गर्नेछ जो महल, देखि कागज बनाउन छ। आफ्नो कल्पना र आफ्नो अद्वितीय दरबार बनाउन - आधारमा तपाईं यस लेखमा वर्णन सर्किट लाग्न सक्छ, तर यो समाप्त गर्न आवश्यक छ कि होइन। साथै, यस्तो उत्पादन एक सजावट रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ - मिठाई उत्पादन लागि र्याक।
कागज को महल जस्तै शिल्प को लागि, तपाईंलाई आवश्यक:
आलु चिप्स डिब्बे;
चरण पुस्तिका द्वारा चरण
कसरी महल बाट कागज बनाउन सिक्न, तपाईं निम्न जानकारी अध्ययन गर्न आवश्यक छ:
आफ्नो महल को तल रूपमा उनको तल छोडेर बक्समा खोल्ने। पर्खालहरु को एक मा एक गेट आकर्षित, त्यसपछि तिनीहरूलाई बक्समा तल संग मात्र जडान छोडेर बाहिर कटौती। माथिल्लो किनारा मा एक माध्यम दाँत, पूर्ण तिनीहरूलाई फेरि एक छत तिनीहरूलाई लीन मोड बनाउन।
अब हामी बालुवा को रंग जडान गर्न आवश्यक छ। बवासीर मा बालुवा विभाजन र, पहेंलो रातो र नीलो रंग संग जडान गर्नुहोस्। अर्को चरणमा अघि बढ्नु अघि, तपाईं सुख्खा बालुवा कुर्न गर्न आवश्यक छ।
महल को पर्खाल गर्न गोंद लागू, र पहेंलो बालुवा तिनीहरूलाई छिडकना। गत्ता रक्स सम्झाउने कि केही टुक्रा बाहिर अगाडि पर्खाल कट सामना लागि, तिनीहरूले गेट को किनारा मा रहन आवश्यक छ।
अब आलु चिप्स एक जार लिन। यो विन्डो बाहिर कटौती, एक छत रूपमा सेवा गर्नेछन् भन्ने शीर्ष कोन छडी। धरहरालाई, गोंद, र त्यसपछि नीलो बालुवा लागू हुन्छ। छत सजाने, रातो बालुवा प्रयोग गर्नुहोस्।
लक आधार गर्न सुरक्षित हुनुपर्छ। उनको, नीलो रंग छ जो गत्ता, लिन लागि, यो संरचना वरिपरि पानी हुनेछ। महल र पानी बीच घाँस, sawdust को छन् हरियो मा चित्रित।
अब तपाईं बस एक रोचक कथा संग आएको र नयाँ कथा को प्रिय बच्चा खुसी छ।
कागज महल कसरी बनाउने
तिनीहरूले दन्तिये प्रेम र चमत्कार विश्वास छ कि यो एक केटा वा केटी, अधिक महत्वपूर्ण छ, - तपाईं बच्चाहरु, यो मामिला गर्दैन। कुनै पनि बच्चा यस्तो उपहार छ खुसी हुनेछन्। आफ्नो आफ्नै हातले लक गर्न नजिकबाट सकेसम्म गर्न, समय र प्रयास को धेरै खर्च गर्नुपर्छ, तर मनपर्ने सन्तान दिनुपर्छ।
काम गर्न, तपाईंले यी सामान लिन आवश्यक:
कागज तौलिए या ट्यूब;
कलम वा Pencils;
कागज बनाउने आफ्नो हात लक गर्न, यो मूल सबैभन्दा सही प्रतिलिपि थियो, यी नियमहरू पालन:
पहिले तपाईं एक टावर बनाउन आवश्यक छ। यो उद्देश्य लागि, दाँत कटौती जो को ट्यूब, एक अन्त, यो भन्दा बढी हुनेछ। तिनीहरूले नै र प्रत्येक अन्य देखि नै दूरी मा स्थित हुनुपर्छ। यो गर्न, तपाईँले पहिला सबै शासक र पेन्सिल प्रयोग, र त्यसपछि मात्र कटौती गर्न सुरु raschertit पर्छ। एक विन्डो र ढोका आकर्षित गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईं को टावर, आफ्नो विवेकमा सजाउनु।
हामी पर्खालहरु बारी। संरचना मूल गर्न सबैभन्दा यस्तै थियो भनेर,7सेमी ताले सधैं पत्थर को निर्माण, बस उनलाई आकर्षित .. -9सेमी, चौडाइ -4आयताकार ढाँचा, को अनुमानित उचाइ कटौती यस पर्खाल3खैरो रंग रंग, र सुकाउने महसुस कलम पछि मनपरी पत्थर आकर्षित।
पछिल्लो भित्तामा आफ्नो पूर्व-तान्ने को गेट बनाउन र त्यसपछि कटौती आवश्यक छ। काठ भन्दा रंग, हामी, जो सामान्य मा फीता पकड मा एक पाश आकर्षित गर्न सक्छन् fantasize। बाँकी पर्खाल अरु जोडिएको छ।
टावर्स फिर्ता जानुहोस्। तिनीहरूले2आसन्न चीरा बराबर उचाइ महल पर्खाल पछि4अंश मा मंडल, साझेदारी गर्नुहोस्। अब प्रत्येक कट पर्खालहरु जडान।
छत गर्न प्राप्त। यो एक टावर र सबै रूपमा गर्न सकिन्छ। यो सबै आफ्नो विचार मा निर्भर गर्दछ। छत लागि गत्ता जो एक सर्कल लिएको छ। अब यसलाई दुई भागमा र रंग अनुकरण टाइल मा कटौती गरिएको छ। तिनीहरूले एक कोन को टावर को शीर्ष संलग्न फारम भनेर अन्त्य सामेल हुँदै। यसलाई राख्न राम्रो छ, तपाईं गोंद संग पर्खाल गर्न छत को सम्पर्क किनारा चिकनाना गर्न सक्नुहुन्छ।
महल तयार छ, तर तपाईं सपना गर्न सक्नुहुन्छ - धरहरालाई झण्डा सजाउनु र विभिन्न सजावट संग पूरक गर्न।
महल कागज बनेको, योजनाहरु यस लेखमा वर्तमान हो जो आफ्नो बच्चा को सपना महसुस र उसलाई आनन्द को एक टुक्रा दिन मदत गर्नेछ। को शिल्पकृति मात्र सजावट रूपमा प्रयोग गरिनेछ भने, यसको स्थिरता बारे मा भूल छैन। उदाहरणका लागि, यो भित्र बाट सुरक्षित हुनुपर्छ जो टास्ने टेप को मदद, हरेक विवरण समाधान गर्न सम्भव छ। एउटै दरबार सिर्फ एक उज्ज्वल रंग शानदार मा सजाने, एक सानो राजकुमारी लागि गर्न सकिन्छ। अब तपाईं एक कागज महल कसरी बनाउने मा विस्तृत निर्देशनहरू थाहा छ। अगाडि जानुहोस्, आफू र आफ्नो बच्चा व्यवहार गर्छन्।
आफ्नो हातले कृत्रिम पत्थर लागि सामूहिक मात्रा बनाउने: सामाग्री प्रविधि
को भित्री मा कृत्रिम मश। कृत्रिम मश कसरी बनाउने?
आलु grohotnogo प्रकार हात। विनिर्माण चरण
कसरी आफ्नो हात संग साबुन बनाउने?
Multivarka "रेडमन्ड" मा जौ porridge: स्वादिष्ट र स्वस्थ पकवान
दक्षिण यूराल बहुमुखी कलेज (चेल्याबिन्स्क): वर्णन, विशेषता, समीक्षा
Astra briar: प्रकार र हेरविचार को विवरण
"Immunovenin": प्रयोग, वर्णन, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
Haim Veytsman - इजरायल को पहिलो राष्ट्रपति
रेस्टुरेन्ट, बारहरू बर्नाउल: आधारभूत जानकारी, समीक्षा